Izisombululo zeMinimalist Door Hardware - iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Izisombululo zeMinimalist Door Hardware
Ngama-80s nama-90s aba ngabathengi abaphambili kunye nokuthandwa kwesitayile esincinci kunye nendlu eyenziwe ngokwezifiso, ishishini lomnyango kunye nomzi mveliso wealuminium ziphuhlise iingcango ezincinci (kubandakanya iingcango ezingabonakaliyo kunye neengcango eziphakamileyo zelingi) ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.
Iingcango ezincinci azinokwandisa indawo ngokubonakalayo, kodwa zidibanise nendawo yonke yokugcina ubunye bendawo. Ke ngoko, i-YALIS iphuhlise izitshixo zokubamba iingcango ezincinci ngokusekwe kwezi mpawu zeminyango encinci.
UKUSETYENZISWA KWENKQUBO YOKUFUNDA Iingcango zoMnyango
Ukulungiselela ukudibanisa isiphatho somnyango kunye nomnyango, i-YALIS isungule uthotho lwe-MULTIPLICITY kwi-2020, ikakhulu kwiminyango ephezulu yokugqibela, kunye nesimbo sayo esincinci, ukufezekisa iziphumo.
1. Ukufakwa kwesiphatho somnyango kungasetyenziselwa umphezulu weengcango, ukuze ibeyindibaniselwano efanelekileyo nomnyango.
2. Isibambo senziwe ngeprofayili ye-aluminium, enokunyangwa ngesiphelo esifanayo nesakhelo sealuminium somnyango omncinci.
3. Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza lokulwa ubundlobongela lenza isibambo somnyango kungabi lula ukuxhoma kwaye sandise ubomi benkonzo yaso.
4. I-bolt igqunywe ngomkhono wenayiloni ukuthintela ukukrwela.
5. Ityala lesitrayikhi elinokuhlengahlengiswa linokunciphisa ubunzima bokufaka kunye nokuphucula ukusebenza ngokufanelekileyo.
Ukujonga iimpawu zeengcango ezincinci, i-YALIS ikwaphuhlise izibambo zeminyango yeRAINBOW. Njengokuphindaphindeka kwezinto, UTHOBOZO lukwabambelela kumxholo wokudibanisa izitshixo zeminyango neengcango ukugcina umanyano lwendawo.
3. Umgama osembindini wesitshixo se-latch utshintshiwe ukusuka kwi-40mm ukuya kwi-45mm, kwaye umngxunya wokuluka wesiphatho somnyango wamkela uyilo lwe-eccentric ukunqanda isandla ekuthini siphathe isibambo xa sijika iqhosha.
4. Ulwakhiwo lwentwasahlobo oluya ngendlela enye luyasithintela isiphatho somnyango ekubeni sixhonywe.
5. Ububanzi besiphatho somnyango yi-40mm, ehambelana ngakumbi nobukhulu besandla somntu kwaye yandisa ukuziva.
Iihenjisi zoMnyango ezifihliweyo
Umnyango ofihliweyo womnyango unomsebenzi wehenjisi yesiko ngaphandle kokutshabalalisa ubuhle beengcango ezincinci. Ngothotho lweYALIS MULTIPLICITY kunye nothotho lweRAINBOW, banokwandisa ubuhle beengcango ezincinci.